What UNESCO is Doing Regarding Gada System? – Chala Dandessa Debela
What UNESCO is Doing Regarding Gada System?
Date: December 1, 2016Author: The Page Admin 0 Comments
UNESCOn dhaabbata barnootaa, Aadaa fi Saayinsii hambaalee qabatamoo fi qabatamoo hin taane galmeessuun akka eeggamanii fi barnootaaf oolan godhu dha.
Yaa’iin Hambaawwan Killayyaa Dhaabbata Barnootaa, Saayinsii fi Aadaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii (UNESCO) 11ffaan Finfinneetti geggeeffamaa jiru Gadaan hambummaan akka galmaa’u murteesse.
Gadaan hambaa addunyaa ta’eeti kan galmaa’e.
Hoggantuum Biiroo Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa aadde Loomii Badhoo ummata maraan baga gammaddan jedhaniiru. Hambaa addunyaa kana galmeessisuuf abbootin Gadaa, hayyoonni, ummannii fi mootummaan hojiin hojjechaa turan dhumarra firii buuseras jedhan aadde Loomin.
Sirna Gadaa kunuunsuun, qorannaa bal’aa irratti gaggeessuun, duudhaalee isaa kunuunsuunii fi dhalootaa dhalootatti akka darbu taasisuunis ga’ee abbootii Gadaa, mootummaa fi ummataa akka ta’e yaadachiisaniiru.
Adeemsi shaklaa gurraacha oomishuu Biisaalheez Poorchugaal, muuziqaa fi shubbisni Maadii Yugaandaa, Yuukreenitti sirni muuziqaa Koozaakooch, Kaamboodiyaatti aadaan muuziqaa Chaapaay Daang Veeng bara kana galmee balaa “UNESCO”rratti galmaa’aniiru.
Ityoophiyaan Gadaadhan ala Daamaraa Masqalaa fi Fiichee Caambalaalaa galmee “UNESCO”rratti hambaa addunyaa kiliyaarratti galmeessifatteetti.
Yaa’ii Hambaawwan Killayyaa 11ffaa Finfinneetti geggeeffamaa jiru kanaarratti Sirni Gadaa hambaa killayyaa addunyaa akka ta’uuf ‘UNESCO’ irratti galmeessisuuf qophiin barbaachisaan xumuramuusaa Abbaan-taayitaa Qorannaa fi Eegumsa Hambaa ibsuun isaa ni yaadatama.
Sirna Gadaa dabalatee hambaawwan killayyaa haarawaa 37 akka galmaa’aniif gaaffiin dhihaateera.
Isaan keessaa hambaawwan 19 yaadni ogeeyyii (dhibbantaa 50 ga’u) itti kennamee murtoof dhihaataniiru.
Biyyoonni waggaa afur afuriin filataman dhibbantaa 50 hafe irratti sagalee erga kennanii booda hambaawwan galmaa’an kan adda ba’an ta’a.
Konvenshiniin Hambaalee Killayyaa ‘UNESCO’ kan ba’e bara 2003tti yoo ta’u, Itiyoophiyaan Konvenshinicha 2006tti mallatteessite.
Yaa’ii kanaarratti hirmaattonni kuma 1 ga’an biyyoota gara-garaarraa wal-ga’aniiru.
Yaa’iin hanga Jimaata dhufuutti turu kun Finfinneetti geggeeffamuunsaa tuurizimii koonfiransiif gahee olaanaa akka qabu ibsameera.
Hojiitti hiikkaa Konvenshinii Hambaawwan Killayyaa fi gaaffii hambaawwan nuuf haagalmaa’anii dhimmoota yaa’ichi irratti xiyyeeffatu keessatti argamu.
Yaa’iin Hambaalee Killayyaa ‘UNESCO’ 10ffaa Naamibiyaatti geggeeffamuunsaa kan yaadatamudha.
Hawwatni tuuristii fi aadaa Itiyoophiyaa eegamanii dhalootaa dhalootatti akka darbanii fi madda beekumsaa akka ta’aniif mootummaan xiyyeeffannoo olaanaa itti kennee hojjataa jiraachuun ni beekama.
Kanaanis Manni-maree Tiraanisfoormeeshinii Tuurizimii qooda-fudhattoota damichaa gara garaa haammate hundeeffamee hojicha hojjataa jira.
Faayidaa sirni Gadaa hambaa kiliyaa ta’ee galmaa’uu;
Toora odeeffannoo ‘UNESCO’ irratti barruun Afaan Ingiliizii fi kanneen biroon kaa’amee jiru waa’ee hambaalee Kiliyaa galmee dhaabbii fedhan, kan balaan irra ga’a jedhame galmaa’uu barbaachisuu fi addattimmoo muuxannoo gaarii waan qabaniif qabeenya addunyaa ta’uun irra jiraata jedhame dabalatee walitti 51 ga’u.
Kanneen keessaa Sirni Gadaa baatii tokkoof akka daawwatamuuf marsariitii barruu ‘UNESCO’ irratti Afaana Oromoo fi Ingiliiziin kaa’amee ture abbaa fuula 77 qabu sirna kana addunyaan dursee akka beekuf barreeffamaan gadi lakkifameet ture.
Ga’ee dubartiin sirna Gadaa keessatti qabduu fi ulfinni siinqee agarsiistudha.
Hambaalee Kiliyaa galmee dhaabbirra taa’uu qaban 37n kaadhimamaniif ulaagaalee gurguddoo shantu barbaadama.
Inni jalqabaa dhuguma aadaadhamoo asoosama namni tokko katabee dhiibbaadhaan uummata irratti fe’a isa jedhu adda baasuu gaafata.
Yoo galmee dhaabbii addunyaarra taa’emmoo bu’aan inni addunyaaf gumaachu ulaagaa gama birooti.Hambaa kana dhalootaaf dabarsaa deemuu akkataan dandessisu wanti qabatamaan jiraayyuu kan jedhu gaaffiin 3ffaati.
Dhimmi 4ffaan Hambaa Kiliyaarraa barbaadamummoo uummatamoo nama muraasatu naaf haa galmaa’uu gaafate kan jedhu koree miseensa biyyootii 24tiin kan xiinxalamudha.
Sirni Gadaa gaaffii Uummata Oromoo ta’uusaa xalayaa Bitootessa 4 bara 2007tti Ministeeraa Aadaa fi Turizimiitti Abbaa Taayitaa Qorannoo fi Eegumsa Hambaaleetiin barraa’een kan muul’ifamedha.
Kanammoo godinaalee gara garaatii kan uummaticha bakka bu’an Abbotiin Gadaa, maanguddoota, dubartootaa fi kanneen biroo 540 ta’an mallattoo isaanitiin mirkaneessaniiru.
Hambaan kunimmoo galmaa’udhaaf qabiiyyeen isaa mirga namoomaa, walitti dhufeenya hawaasaa as keessatti ga’ee dubartootaa fi daa’immaniis kan ilaallatu ulaagaa isa dhumaati.
Itti- aanaan Daarektarri Dhimma Aadaa ‘UNESCO’ Firaanchiskoo Baandariin galmeessa Sirna Gadaa kana irratti yemmuu dubbatan hambaaleen dhaabbanni isaanii gama sirna bulchiinsaan jiran galmee dhaabbii irra kaa’e muraasadha.
Adeemsi galmee mirkaneessuu Itiyoophiyaa dabalatee sagalee kennanii ga’ee koree miseensa biyyoota 24 ta’us, haala bulchiinsa Sirni Gadaa ittiin ilaalaniin qabeenya addunyaa ta’ee galmoofnaan ‘UNESCO’ iyyuu faayidaa akka ta’e kaasani.
Dhaabbatichi bara Faranjootaa 2008 irraa jalqabee hambaa kiliyaa 336 galmeesaarra kaa’era.
Maalummaa sirna Gadaa Oromoo;
Oromoon barnooota ammayyaa qaroomina har’aa addunyaan fiixee beekumsaa ittiin yaabbate osoo hin qabaatin, sirna bulchiinsa walxaxaafi qorannoo waggoota hedduu fudhachuu danda’u, kan jiruufi jireenya namaa karaa hedduudhaan gurmeessee oogganu, sirna Gadaa; demokraasii dhugaatiin wal bulachaa dhufee jira.
Gadaan Oromoo waliin walitti hidhata cimaa ta’e qaba. Jireenya hawwaasa Oromoo guyyaa guyyaa keessatti hiika addaa kan qabuufi raawwiin jireenyaa martinuu qajeelfama sirna Gadaa jalatti kan raawwatudha. Sirni Gadaa Jildii 1ffaa Asmaroomiin waabeffatee akka ibsetti, “Gadaan Sirna waan mara of keessatti qabuufi jireenya Oromoo kallattii maraan sakatta’udha,” jedha.
Gadaan Sirna Ddimkraasii namni marti itti amanee fudhatu, adeemsa hawwaasni ittiin wal hin qoodneen; tokko isa biroo irratti loogii ykn dhiibbaa kamiinillee uumuus ta’e uumsisuu bifa hin dandeenyeen keessatti hirmaatu ture.
Kanaaf, Gadaan Sirna Bulchiinsaa hawwaasni Oromoo achii as dhufaan sadarkaalee itti keessatti hirmaatamu ka’ee, walii isaa ittiin oogganaa turedha.
Adeemsa wal bulchuu sana keessatti Oromoon Waaqa tokkichatti waan amanuuf, Waaqni ammoo miidhaa namaa waan hin feeneef, Oromoon wal qixxumma namaatti haaluma waaqni fedhu sannaan amana.
Gadaan Seera jedha; Seerri ammoo kan Waaqaati, jedha. Yaada kana keessatti kan ifu, waaqeffannaa isaa waliinis walitti hidhata cimaa akka qabutti ilaaluun ni danda’ama.
Oromoon sodaafi safuu Waaqaaf iddoo guddaa qaba. Haala kanaan Gadaan waa hunda aadaa, jireenya hawwasummaa, Dinagdee, Sirna Bulchiinsaa, Siyaasaa akkasumas Amantaafi kanneen biroo kanaan walitti hidhata qaban sirriitti ijaaramanii kan keessatti haala adda addaan calaqqisiif amaniidha.
Gadaan ijaarsa Sirna dimokiraasii keessatti fakkeeenyummaa olaanaa bakka hin buufamne qaba, kana jechuun, Sirni Gadaa mataan isaa Dimokiraasiidha jchuu ta’a.
Bulchiinsa Sirna Gadaa keessatti aangoon yeroo itti walitti kennaniifi wal harkaa fuudhan qaba. Adeemsi kun fedhiifi yaada namoota dhuunfaa ykn kan garee muraasaan oogganamuufi giddugaleessa godhatu miti.
Addunyaa har’aa keessatti yoo ilaalle, qabeenyi hedduuniifi lubbuun gara malee kan wareegamaa jiruuf aangoo bifa dimokraatawa ta’een walitti kennuun waan hin amaleeffatamneef akka ta’e ifaadha.
Previous Previous post: Barri Maraatummaa Dhala Namaa Gahaa Jira! Nu haa oolchu!
Next Next post: South Africa has launched a major clinical trial of an experimental vaccine against the AIDS virus